प्रकृति र मानिसको यो अप्रितम संवाद वसन्त र गृष्म ऋतुको सङ्क्रमणकालमा बढी हुन्छ । चैतको समाप्ति र वैशाखको आरम्भमा प्राकृतिक वातावरणले कसको मनमा उत्साह र उमङ्ग पैदा नगर्ला र ?
चैत–वैशाखमा चराहरू कसरी रमाउँछन् ? जङ्गलका जनावरहरू कसरी प्रेम गर्छन् ? मानिस कस्ता गीत गुन्गुनाउँछन् र जीवनलाई माधुर्य बनाउँछन् भन्ने बुझाउन राष्ट्रकवि माधवप्रसाद घिमिरेको ‘वैशाख’ कविता नै काफी छ ।
यस्ता सयौँ सिर्जना छन्, जसले प्रकृति र समाजलाई सुललित रूपमा शब्दमा बुनेका छन् । लोकजीवनका लय, प्रकृतिका यायावरीय पाटोलाई हरेक मानिसले आफ्ना मन–मस्तिष्कमा उतारिरहेको हुन्छ । प्राकृतिक छटालाई स्रष्टाले टपक्क टिपेर भाका मिलाउँछन् र प्रकृतिलाई नै अर्पण गर्छन् ।
आखिर मानव सभ्यताको थालनी पनि जङ्गल युगबाटै भएको थियो । ‘पुष्पलालका छानिएका रचना भाग–४’ मा आदिम समाजमा मानिसले आफ्नो खाना जुटाउने साधन (ढुङ्गा, तावो, घाँसका रूख) को ठूलो महत्व हुने भएकाले तिनलाई संरक्षण र मान्ने संस्कारका कारण ढुङ्गा, शिवलिङ्ग (महादेव), फलाम (यमराज), पीपल (विष्णु), वरःब्रह्मा, शमी (सूर्य), तुलसी (विष्णु) आदिलाई देवताका रूपमा पुजिन थालिएको त्यसै उल्लेख भएको होइन ।
पछि देवपूजाको संस्कृति र परम्परा बस्यो । मेक्सिम गोर्कीले ‘संस्कृति मानवीकृत दोस्रो प्रकृति भएको’ भनेको कुरा निनु चापागाईंको ‘सन्दर्भ: संस्कृति र सांस्कृतिक रूपान्तरण’ पुस्तकमा उल्लेख हुनुले समाजबाहिर संस्कृतिको अस्तित्व नहुने र प्रकृतिमाथि श्रम र पसिना लगाएर मानिले संस्कृति निर्माण गरेको स्पष्ट हुन्छ ।
हरेक वसन्त पञ्चमीमा सरस्वती पूजा र अक्षरारम्भ गरिने भए पनि विद्यालय तहमा विद्यार्थीको नयाँ शैक्षिक सत्र पनि नयाँ वर्षमै थालनी हुन्छ । तल्लो कक्षाको परीक्षाफल हातमा लिएर माथिल्लो कक्षामा भर्ना हुने तीव्र प्रतीक्षामा रहेका विद्यार्थी छुट्टीको यो समयमा प्रकृति र वातावरणमै टहलिन पुग्छन् । पर्यटकीय गन्तव्यमा पुगेर नयाँ–नयाँ विषय मनमा सँगाल्न पुग्छन् । नयाँ वर्ष आफ्नो घर र मनको मन्दिरमा भिर्त्याउन मानिसले प्रकृतिसँग प्रेमिल संवाद गरिरहेका हुन्छन् ।
अनेक संस्कृति, जाति र भाषाभाषीयुक्त नेपालमा जातजातिगत नयाँ वर्ष र चाड छन् । व्यावहारिक प्रयोगका दृष्टिले विक्रम संवत्को नयाँ वर्ष विशेष छ, सायद यही भएर विदेशी पनि यस्ता चाड र संस्कृतिबारे अध्ययन, अवलोकन गर्न नेपाल भ्रमणमा आउँछन् ।
ग्वङ्गःलाई जस्तै भक्तपुरको संस्कृतिका अध्येता डा. पुरूषोत्तमलोचन श्रेष्ठलाई पनि विक्रम संवत्को नयाँ वर्ष भन्नेबित्तिकै बिस्केट जात्राको सन्दर्भ उठाउन मन लाग्छ । चैत मसान्तको दिनमा लिङ्गो ठड्याउने र नयाँ वर्षको १ गते ढाल्ने यो परम्परा अहिले पनि निरन्तर छ । बिस्काः जात्रा भक्तपुरको थिमी, काठमाडौँको धापासी र टोखामा मनाइन्छ ।
यो जात्रा खाई संल्हुका दिन मनाइने गरिन्छ । भैलः (भैरवनाथ) को प्रतीक मानिने लिङ्गो (ल्योसिं) तान्त्रिक विधिअनुरूप पूजा–अर्चना गरी साँझ ढालिन्छ । बिस्केट जात्राको चौथो दिन पुरानो वर्षको बिदाइको पूर्वसन्ध्यामा लिङ्गो ठड्याइन्छ । पचपन्न हात लामो उक्त ल्योसिं तान्त्रिक विधिपूर्वक दस कर्म विधान गरी ढालिन्छ । ल्योसिं ठड्याउनुअघि ल्योसिंको कोखा (टुप्पो) मा नाग र नागिनीको प्रतीकस्वरूप दुईवटा ध्वजा बाँधेर अष्टमातृकाका प्रतीक आठवटा डोरीले तानेर उक्त ल्योसिं ठड्याइने प्रचलन छ ।
बिस्केट जात्रा भैरव र भद्रकालीको रथ तानेर लिङ्गो ठड्याउने परम्परा हो । यो लिच्छविकालीन समयदेखि चलनमा आएको हो । यो शिव सभ्यतादेखि आरम्भ भएको किंवदन्ती छ तर यसबारे वैज्ञानिक तथ्यहरू फेलापरेका छैनन्् । सूर्य्विनायकनिवासी ग्वङ्गः भन्नुहुन्छ, ‘नेपालमा सबै संस्कृतिबारे पर्याप्त खोज–अनुसन्धान हुन सकेको छैन । यसमा सरकारले विशेष ध्यान दिनुपर्छ ।’
पहिला–पहिला अहिलेजस्तो शुभकामनाका लागि ‘न्यु इयर ग्रेटिङस्’ दिने प्रचलन थिएन । शुभेच्छाका लागि मनासा त हुन्थ्यो तर वाचा हुँदैनथ्यो । अहिले ह्याप्पी बर्थ डे, न्यु इयर फेस्टिभल हुन्छन् । यो पाश्चात्य सभ्यता र इन्टरनेटको जमानाको प्रभाव हो ।’ ग्वङ्गः भन्छन्, ‘हामीले आफ्नो मौलिक संस्कृतिलाई बिर्सिए क्रिश्चियन पद्धतिको प्रभावलाई बढावा दिनुहुँदैन । हरेक स्थानीय तहले पाठ्यक्रमका रूपमा हाम्रा मौलिक संस्कृति, स्थानीय परम्परा र पर्यावरणबारे अध्यापन गराउने पद्धतिको थालनी हुनुपर्छ ।’
विक्रम संवत् नेपाली पञ्चाङ्गमा आधारित प्रयोगमा रहेको नेपालको राष्ट्रिय पात्रो तथा आदि संवत् मानिन्छ । यो प्राचीन हिन्दु परम्परा र वैदिक समयाङ्कनमा आधारित सौर्य पात्रो हो । यो ग्रेगोरियन पात्रो –अङ्ग्रेजी) भन्दा ५६ वर्ष ८ महिना १५ दिन अगाडि छ ।
यस पात्रोमा वर्षको सुरूवात वैशाखको पहिलो दिनबाट हुन्छ । नयाँ वर्षको सुरूवात सामान्यतः ग्रेगोरियन पात्रोको अप्रिल महिनाको १३ वा १४ तारिखमा पर्छ । विक्रम संवत् सूर्यसँग सम्बन्धित भएकाले विक्रम संवत्मा ग्रह–नक्षत्रका नाम पनि महिनासँग सम्बन्धित छन् । विक्रम संवत् प्राकृतिक रूपमा सञ्चालित हुँदै आएको छ । विक्रम संवत्बारे अनेकौँ विवाद पनि प्रस्तुत भइरहेका छन् । विक्रम संवत् नेपालको आदिसंवत् हो ।
उज्जैन (भारत) का राजा विक्रमादित्यले यो संवत्को प्रारम्भ गरेका हुन् । इतिहासविद् प्रा. दिनेशराज पन्तका अनुसार यो संवत् १०७ सम्म कुँदिएको पाइन्छ । यसलाई पछि विक्रम संवत्मा रूपान्तरण गरियो । विक्रम संवत् सक् संवत्भन्दा १३५, नेपाल संवत्भन्दा ९३६ र इस्वी संवत्भन्दा ५७ वर्ष जेठो छ ।
‘गणितीय दृष्टिले विक्रम संवत्को महत्व छ । कुनै बेलामा वैशाख १ गते दिन र रात बराबर समयको हुने भएकाले पनि यो संवत् चलाउने वैज्ञानिकता प्रमाणित हुन्छ । ज्योतिषीय गणनाका दृष्टि र राशि पद्धतिमा यो संवत् उचित छ । यद्यपि, हरेक जातजातिले आफ्नै मौलिक रूपमा मनाउने नयाँ वर्षको आफ्नै सांस्कृतिक महत्व रहन्छ ।’ इतिहासबारे प्रामाणिक तर्क गर्ने पन्त यो संवत् राणाकालअघि नै प्रयोगमा आएकाले चन्द्रशमशेर राणाको पालादेखि विक्रम संवत् चलेको भन्नेमा उहाँको विश्वास छैन ।
काभे्र जिल्लाको नालामा उत्तरापुर राज्यको नाउँमा विक्रमादित्य राजाले राज्य गरेको ऐतिहासिक ठाउँमा मेला लाग्ने गरेको किंवदन्ती पनि छ । विक्रमादित्य राजाले राज्य गरेको ऐतिहासिक ठाउँमा साँखु वज्रयोगिनीको मन्दिरपरिसरको केहीमाथि विक्रमादित्य राजाको टाउकाको बज्राचार्य वंशका पुजारीले पूजा गरिआएका छन् । ती राजाले नेपाललाई विस्तार गर्दै काशीसम्म पुगेका र काशीमा विश्वनाथको मन्दिर स्थापना गरेको भन्ने स्कन्द पुराणको हिमवत्खण्डमा उल्लेख पाइन्छ । रासस